?Dawladdii hore waxay ka dhisnayd ciidanka, waxayna ka burburtay ciidanka, haddii aad sharafta dalka ilaalisaan nabadu way soo naqonaysaa? Madaxwayne Shariif – Radio Daljir
?Dawladdii hore waxay ka dhisnayd ciidanka, waxayna ka burburtay ciidanka, haddii aad sharafta dalka ilaalisaan nabadu way soo naqonaysaa? Madaxwayne Shariif
Nofeembar 7, 2011 12:00 b 0
Moqdisho, Nov , 07 ? Madaxwaynaha dawladda Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed ayaa maantay booqasho ku tagay meelo badan oo ka mida fariisimo ciidanka dawladdu ay ku leeyihiin degmooyinka kale duwan oo ka tirsan magaalada Moqdisho.
Madaxwayne shariif ayaa goobahaasi maantay kula hadlay cutubyada kale duwan ee ciidanka qalabka sida ee dawladda, waxaa madaxwaynuhu isagoo guubaabinaya ciidanka dawladda uu yiri ?Dawladdii hore ee Soomaaliya waxay ka dhisnayd ciidanka, waxayna ka burburtay ciidanka, haddii aad aad sharafta dalka ilaalisaan nabaddu way soo naqonaysaa?.
Madaxwayne Shariif Shiikh Axmed ayaa sheegay in ujeedada loola dagaalamayo kooxda Al-shabaab inaysan ahayn in wax la dilo kaliya, balse hadafkoodu yahay in nabad-laga dhaliyo dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, Shiikh Shariif ayaa sheegay in ummada Soomaaliyeed ay aad ugu baahan-yihiin nabad ay ku noolaadaan, waxaa uu tilmaamay in shacabku ay aad u daalanyihiin isla markaana aysan u sii dulqaadan Karin dagaal sii socda.
Madaxwayana DFKS Shiikh Shariif Shiikh Axmed waxaa uu sheegay in ciidanka dawladda Soomaaliya ay ku dhex-jiraan rag badan oo la shaqeeya Al-shabaab, waxaa uu tilmaamay inay dadka shacabka had iyo goor dhibaataayeen, madaxwaynuhu isagoo sii wata hadalkiisa ayuu ku booriyay ciidanka inay iska dhex-saaraan cid kasta oo lagu arko fal caynkaas oo kale ah, isla markaana la saari doono maxkamada ciidanka qalabka sida ee dawladda Soomaaliya.
Wasiirka gaashaandhigga federaalka oo maanta Muqdisho ku soo laabtay, kaddib kormeer uu ku tagay fariisimada ciidan ee Gobollada Jubbooyinka.
Baahin: Axad, Nov 06, Weriye Jaamac C/raxmaan ~ Daljir ~ Galkacyo. Caalamka Islaamka oo maanta laga xusayo munaasabada Ciid al adhxa; Iska-horimaad hubaysan oo sababay khasaare dhimasho & dhaawac leh oo ka dhacay Ceerigaabo, Sanaag; Diblamaasiyiin ka tirsan wasaarada arrimaha dibedda ee dawlada federaalka oo tababar uga furmay Dubai.